Izindaba - Uyini umehluko phakathi kwe-ceramics ne-bone china?
1. Ukugcinwa kwezinto zobumba
1. Umshini wokuhlanza indlu ungasetshenziselwa ukuhlanza nsuku zonke.
2. Faka i-ammonia encane ngensipho noma usebenzise ingxube yenani elilinganayo le-linseed ne-turpentine kuqala, okuzoba nokuncipha okuqinile futhi kungenza amathayili acwebezele ngokwengeziwe.
3. Uma uchithela iziphuzo ezinamandla zokudaya ezifana netiyi elinamandla noma uyinki ezitinini, zisule ngokushesha.
4. Wax amathayela acwebezelisiwe njalo ukuthola ukuvikeleka okuhlala isikhathi eside, futhi isikhathi esiyizinyanga eziyi-2-3.
5. Uma kunemihuzuko embalwa ebusweni besitini, gcoba umuthi wokuxubha endaweni eklwebhiwe bese uyisula ngendwangu ethambile eyomile ukuze uhlanze imihuzuko.
2. Ukugcinwa kwethambo china:
1. Kumele ihlanzwe ngesandla, hhayi ngomshini wokuwasha izitsha. Uma ungafuni ukugeza ngesandla, kufanele ukhethe umshini wokuwasha izitsha ngomsebenzi wokuwasha i- “porcelain and crystal”.
2. Izitsha zethebula ezinemiphetho yegolide akufanele zifakwe kuhhavini we-microwave ukugwema ukubola.
3. Inani le-PH lokuwasha kufanele libe phakathi kuka-11-11.5.
4. Uma ugeza ngamanzi ahlanzekile, izinga lokushisa lamanzi akufanele leqe ama-80 ℃.
5. Ungacwilisi inkomishi eshisayo ngqo emanzini abandayo, ukuze ungalimazi i-porcelain ngenxa yezinguquko zokushisa ezisheshayo.
6. Uma kukhona ukuklwebheka, ungasebenzisa umuthi wokuxubha ukupholisha.
7. Uma kunamabala wetiye, ingahlanzwa ngejusi kalamula noma uviniga.
8. Kungcono ukungayisebenzisi ngokushisa okungazelelwe, ukuze ungaqhume.
9. Ungasebenzisi ilangabi elivulekile ngqo
1. Izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene:
Ubumba lwenziwe ngobumba lwemvelo kanye namaminerali ahlukahlukene wemvelo njengezinto ezisetshenziswayo eziyinhloko, kanti ubumba olunokuqukethwe kwethambo okungaphezulu kwama-25% entweni eluhlaza kungu-bone china.
Ukudubula kwe-Bone china kwamukela inqubo yesibili yokudubula, futhi izinga lokushisa liphakathi kwama-1200 degrees no-1300 degrees. Ngokuvamile, ama-ceramics angakhiwa ngemuva kokudubula ngamadigri angama-900.
Ngenxa yobulukhuni obuphakeme be-bone china, i-porcelain incane kakhulu kune-porcelain ejwayelekile, ngakho-ke i-bone china yevolumu efanayo ilula kakhulu kune-porcelain.
I-Bone china yaqhamuka e-United Kingdom futhi iwubumba olukhethekile lomndeni wasebukhosini kanye nezikhulu zase-United Kingdom. Izinto zobumba zavela eChina ngomlando omude.
1. Umbono onempilo
Umehluko ezintweni zokwakha nobungcweti phakathi kwethambo china nezinto zobumba inquma igebe labo lebanga. Amalahle amathambo ezilwane ukhetho olukhulu ekwenzeni amathambo e-china, futhi okuqukethwe kwawo kufinyelela kuma-40%. Njengamanje, ukudla kwamathambo okusezingeni eliphakeme komndeni wasebukhosini waseBrithani okunokudla okuphezulu kakhulu kwamathambo emhlabeni kufinyelela kuma-50%.
Imbali yethambo le-china nobuso obucwebezelwe buhlanganiswe ndawonye, ​​futhi ayiqukethe umthofu ne-cadmium okuyingozi emzimbeni womuntu. Kungabizwa ngokuthi "i-porcelain eluhlaza" yangempela. Ukusetshenziswa kwesikhathi eside kunenzuzo empilweni yomuntu. I-Bone china ixoshwe kabili, futhi inqubo iyinkimbinkimbi. Ikhiqizwa kuphela eBrithani, eChina, eJapane, eJalimane, eRussia naseThailand. I-Bone china ilula, iminyene futhi inzima (iphindwe kabili njenge-porcelain esetshenziswa nsuku zonke), akulula ukugqokwa nokugqashuka, ukushintshana ngokushisa ngama-180 degrees Celsius nama-20 degrees Celsius ngaphandle kokuqhekeka, futhi isilinganiso sokumunca amanzi singaphansi kuka-0.003%.
3. Thermal ukwahlukanisa umphumela
Uma kuqhathaniswa nobumba bendabuko, i-bone china inokugcinwa okungcono kokushisa nokunambitheka okungcono lapho iphuza ikhofi noma itiye.
I-bone bone ihlala isikhathi eside kunama-ceramics ajwayelekile. Lokhu kungenxa yokuthi ukwakheka kwethambo i-china kuhlukile kune-porcelain ejwayelekile. Ingaba mncane, iqine futhi imelane nokugqokwa, kungelula ukugqoka nokuqhekeka. Ubulukhuni bethambo china kufanele futhi bube ngaphezu kwezikhathi ezi-2 zezobumba. Ithambo china ngeke liqhekeze ngesikhathi lapho ukushisa kushintshaniswa phakathi kuka-180 ℃ no-20 ℃ emanzini. Kodwa-ke, kungcono ukuthi ungapholisi ngamabomu ukupholisa nokushisa ngesikhathi sokusetshenziswa, ngenxa yokwanda nokushisa okushisayo, imikhiqizo yePorcelain ijwayele ukuqhuma.
5. Ibanga lomkhiqizo
Uma kuqhathaniswa nobumba olujwayelekile, i-bone china isezingeni eliphakeme kakhulu. Isikhathi eside, i-bone china ibiyipulangwe elikhethekile lamakhosi aseBrithani nezikhulu. Njengamanje ukuphela kwendlwana esezingeni eliphakeme eyaziwayo emhlabeni. Inamanani amabili okusetshenziswa nobuciko. Kuwuphawu lwamandla nesimo futhi kwaziwa njengenkosi yobumba.
Ngaphezu kwalokho, i-china bone ithambile futhi iyakhanya, ukwakheka kwayo kunhle futhi kunenhle, ubuso bombala bumanzi njengejade, kanti nembali yembala imbala kakhulu. Ukuthuthukiswa kwe-bone china kwamukelwe futhi kwasetshenziswa abantu abaningi ngokwengeziwe. Azisekho nje kubafana abadlayo, izitsha zesobho, kodwa futhi njengohlobo lokuzijabulisa kwemfashini nobuciko, njengokubonakaliswa kwempucuko yokudlela, Kancane kancane kwangena ezimpilweni zethu zansuku zonke.